Inona avy ireo masontsivana teknika mahazatra roa aseho an'ny LCD?
1. Fanoherana ny IC fanaraha-maso ampiasaina amin'ny fanamboarana ny efijery LCD 、 Fitaovana toy ny sivana sy horonantsary orientation, Misy ifandraisany amin'ny tsy fitovizan'ny tontonana, Ho an'ny mpampiasa ankapobeny, ny tahan'ny fifanoherana 350: 1 dia ampy, na izany aza, tsy mitovy eo amin'ny sehatry ny matihanina dia tsy afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa. C ...
Maninona ny OLED no salama kokoa noho ny LCD.
Ny jiro manga kely kokoa, ny fampisehoana loko OLED dia mahazo aina kokoa amin'ny mason'olombelona ary ny antony hafa mahatonga ny OLED ho salama kokoa noho ny LCD. Ny namana izay mitsidika ny Station B matetika dia maheno ity fehezanteny ity: Barrage Eye Protection! Raha ny marina dia te-hanampy Buff fiarovana ahy aho, telefaona finday na tele fotsiny no ilainao ...
Manamboatra fetra isan'andro ny orinasa mpanamboatra tontonana Nissha! Voafetra ny fiantraikan'ny valanaretina, ary hiakatra ny vinavinam-bola H1
Voafetra ny fiatraikan'ny pnemonia coronavirus (COVID-19, fantatra amin'ny anarana hoe pnemonia vaovao coronary), Nissha, mpanamboatra tontonana lehibe iray, nahomby tamin'ny fividianana tombony tamin'ny telovolana lasa teo. Ary hampiakatra ny vinavinan'ny tatitra ara-bola H1 amin'ity taona ity, Stimulate th ...
dia namolavola efijery mangarahara izay azo ampiasaina tsy misy fifandraisana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-07
dia namolavola efijery mangarahara tsy misy fifandraisana izay afaka mahita ny ilan'ny efijery, manofahofa fotsiny ny rantsan-tànanao, tsy mila hikasika ny efijery hiasa. -mampisaraka partitions apetaka amin'ny kaontera amin'ny toeram-pivarotana ....
Fampidirana ny LTPS？
Low Temperature Poly-silicon (LTPS) dia orinasan-teknolojia tany Amerika Avaratra tany Japon tany am-boalohany mba hampihenana ny fanjifana angovo fampisehoana Note-PC ， Ny teknolojia novolavolaina mba hiseho ho manify sy maivana kokoa ny Note-PC, Manodidina ny tapaky ny taona 1990, ity teknolojia ity nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny fitsarana。Ny ...
Fampidirana ny LCD？
Ny efijery fampisehoana dia fitaovana mahazatra sy manan-danja tokoa amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny efijery fampisehoana dia mampiseho amintsika ny karazam-baovao rehetra amin'ny alàlan'ny efijery, Andao isika hahazo vaovao marobe avy amin'izany. Araka ny fitaovana sy ny teknolojia samihafa, azo zaraina CRT fampirantiana display Fampirantiana Plasma
Ahoana ny fizarana ny lalàna LCD A sy B?
Araka ny kalitaon'ny tontonana LCD, azo zaraina ho kilasy telo izy: A, B ary C ， Ny fototry ny fanasokajiana dia ny isan'ny pixel maty. Saingy tsy misy lalàna mifehy mafy sy haingana eto amin'izao tontolo izao, Noho izany, tsy mitovy ny fenitry ny fanamafisana ny firenena samy hafa. izahay ...
Ahoana ny fomba hividianana ireo singa elektronika tsara indrindra
Zava-dehibe ny fanomezana loharano tsara. Voalohany, tokony ho fantatrao fa ny singa dia voasokajy ho karazany roa lehibe - ny passive sy ny active. Components Passive: Resistors, Capacitors, Inductance Ireo singa elektronika dia sokajiana ho mavitrika na passive hatramin'ny fiasa. Raha fintinina, a ...
Ny haitao miharo ny havoana, ny SMT ary ny fitaovana mifandraika aminy, ny SMD dia manafaingana ny fivoriambe PCB satria ireo singa ireo dia miakatra eo amin'ny solaitrabe. Jereo ao anatin'ny fitaovana elektronika vita ara-barotra amin'izao fotoana izao ary feno fitaovana minitra io. Raha tokony hampiasa tradisyon ...
Laharana fivarotana indostrialy tontonana manerantany ho an'ny telovolana fahatelo amin'ny 2020
Consultants Chain Supply Supply DSCC） Nisy tatitra navoaka tato ho ato izay fa ny varotra indostrian'ny tontolon'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2020 dia nahatratra ny ambaratonga avo indrindra hatramin'ny telovolana fahefatra 2017, ho an'ny $ 30,5 miliara, fiakarana 21% tamin'ny telovolana teo aloha , Fisondrotana isan-taona amin'ny 11%。 ...
Miorina tsara ny teknolojia famantaran-tànana eo ambanin'ny efijery TFT FoD
Ny tahan'ny fidirana amin'ny fantsom-pifandraisana ambanin'ny efijery dia nitombo, fanamby 30% raha vantany vao 2021 Misy faminaniana momba ny maso ivoho, ny teknolojia fanekena ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery dia natomboka tamin'ny taona 2018, antenaina fa hampitomboina bebe kokoa ireo teknolojia azo ekena ho pro. ..
Amin'ny taona ho avy dia 86% amin'ny vina LCD TV no hohanin'izy ireo!
Ny masoivoho mpikaroka momba ny tsena Omdia dia namoaka ny vaovao farany, Tombanana ho LCD 256 tapitrisa ny fandefasana tontonana amin'ny 2021. 6% isan-taona, Fa ny habetsaky ny fividianana ireo ozinina marika 10 ambony TV dia nitombo hatramin'ny 86%. ， Amin'ny herintaona, mety hiteraka ady amin'ny loharanon'ny fahitalavitra izany ....